एच.के.एन.वि.ए.द्धारा पोखरा ब्याडमिन्टन संघलाई १५ लाख सहयोग - ConfuseNepal
एच.के.एन.वि.ए.द्धारा पोखरा ब्याडमिन्टन संघलाई १५ लाख सहयोग
३ श्रावण २०७५, बिहीबार ३ श्रावण २०७५, बिहीबार कन्फ्युजनेपाल0Comments
नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा केन्द्रको रुपमा मानिदै आएको पोखरामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ब्याडमिन्टन कबर्ड हलको सहयोगार्थ एच.के.एन.बि.ए. (हङकङ नेप्लिज ब्याडमिन्टन एशोसीयशन) कम्मर कसेर लागि परेको छ । जसको पहलमा १३ लाख भन्दा बढी सहयोग रकम संकलन भएको छ ।
गत आइतावार जोर्डनमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि उक्त सहयोगको बारेमा जानकारि गराईएको थियो । हालसम्म ब्यक्तिगत, संस्थागत सहयोग र च्यारिटी खेल मार्फत १३ लाख भन्दा बढी सहयोग रकम सङकलन भएको एशोसियशनका सचिव हेमराज राईले जानकारी दिए । कार्यक्रममा एशोसियशनका अध्यक्ष चित्र गुरुङ बोल्दै हाम्रो तार्गेट रकम भनेको १५ लाख सङकलन गर्ने रहेको बताउदै अपुग रकम पुरा गर्न अझ सहयोग सङकलन गरिनेछ ।
यहि आउदो अगस्ट पहिलो हप्ताभित्र उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने योजनामा रहेको एशोसियशनले कुनै पनि हालतमा आफ्नो तार्गेट पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार निर्माणधिन ब्याडमिन्टन कवर्डहलमा बनिने ४ कोर्ट मध्य एक कोर्टको नाम हङकङ नेपालीको नाममा रहनेछ ।
सन् २०११ बाट संगठित एच.के.एन.बिए निरन्तर यस्ता खाले सहयोगमा भाग लिदै आएको छ । त्यसै गरेर एच.के.एन.बि.ए. को उक्त अभियानलाइ सम्मान गर्दै एच.के.एन.टी.एस. (हङकङ नेप्लिज टेनिस सोसाइटी) ले पनि रु ५०,००० सहयोग गरेको छ ।
महिला विश्वकप फुटबल अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने
बुढा सुब्बा गोल्ड कप २२औँ संस्करणको उपाधि मनाङ मस्र्याङ्दीको पोल्टामा
← ‘गाँउ गाँउ बाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ’ गीत नेपथ्य ब्याण्डले गाए
फ्राइडे रिलिजमा भैरेको बर्चस्व →
एकल स्विमिङमा गौरीकाले नेपाललाई ऐतिहासिक स्वर्ण दि…
टेक्निकल ह्याण्डबुक सार्वजानिक, बी र सी डिभिजन लिग…
३० रुपैयाँ प्रति केजीको खर्बुजा ६० रुपैयाँ प्रती क…